IHalong Bay, ikhadi leposi laseVietnam | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Iziqondiso, Vietnam
La IHalong bay ngaphakathi Vietnam, enye yezindawo ezidume kakhulu e-Southeast Asia. Indawo okuyiwa kuyo ojosaka abacebile nabavakashi ngokufanayo, kungahle kungabi yindiza eshibhe kakhulu kepha izindleko ngokungangabazeki ziyanqotshwa ngokungenisa izihambi okuhle nokushibhile.
IHalong Bay kusenyakatho yezwe, budebuduze nomngcele neChina futhi amakhilomitha ayi-170 nje ukusuka eHanoi, elinye idolobha elidumile elinabavakashi. Kusukela ngo-2011 iHalong Bay ingenye entsha Izimangaliso Eziyisikhombisa Zomhlaba. Ake sithole!
Itheku ithatha cishe amakhilomitha-skwele ayi-1500 futhi iyindawo enhle evikelwe engaphansi kwelebula ye- Amagugu Omhlabakusukela ngo-1994. Ugu luhlanganisa amakhilomitha ayi-120 futhi njengoba le ndawo iheha kakhulu, kunezinto eziningi ezingenziwa futhi uzijabulise lapha.
Ungathatha izikebhe zokuhamba ngesikebhe, udle kwenye yezindawo zokudlela ezisethekwini, uvakashele ezikhangayo, uyothenga, ujabulele ukushona kwelanga okungenakulibaleka noma wenze imisebenzi esebenzayo efana ne-kayaking. Ake siqale ngezikebhe.
I-Los i-cruises Banikezwa amahhotela amaningi kanye nabasebenzeli bezokuvakasha ngakho-ke, kusukela emanzini, ukuthi umuntu angabona izinkulungwane zeziqhingi eziyihlobisayo, amabhishi ayo amahle, imigede yamatshe, amachibi angaphakathi kanye nemizana yonke eyakhiwe phezu kweziqeshana. Yingakho kuyigugu lomhlaba ngakho-ke iseluleko sami ukuthi wenze uhlobo oluthile ukugibela isikebhe.
Kukhona ukuhamba ngezinyawo kweHulong Bay ngakho konke ukuthanda, kusuka kubanokusho kuya kojosaka. Kungakho kungcono ukuthi ungafiki futhi uhambe ngosuku olufanayo, kufanele uhlale ubusuku obubodwa. Izikebhe eziningi zihlanganisa i- isiqondisi sokukhuluma isiNgisi futhi uma ubaqasha ehhotela, nakanjani ifaka phakathi i- ukudluliselwa, amathikithi okuya kumasayithi akhokhisa ukungena ngisho nokuzijabulisa okuthile okukhanyisela abanye.
Futhi, uma unemali eningi, kukhona ukuhamba ngezinsuku ezimbili nobusuku obubodwa. Ukuze uthole imali ethe xaxa, ubuhle obengeziwe obungahlangana futhi futhi, kunesikhathi esiningi sokubhukuda, i-snorkeling, i-kayaking noma ukuhamba ngezinyawo.
Ukumiswa okuphoqelekile kwemikhumbi ye-cruise yi- ICat Ba Island enamadolobhana antantayo, izindawo zokudlela kanye namahhotela nemigoqo. Phakathi kolwandle nezintaba eziluhlaza lesi siqhingi sihle, saziwa ngezilwane zaso. Kungamakhilomitha angama-28 ukusuka eBai Chay Port futhi iyindawo ethandwa kakhulu yokubhukuda nokudayiva kancane ngoba inamanzi amaningi angaphansi kwamanzi uhlelo lwamakhorali, imihume ejulile kakhulu namachibi angaphakathi ayisithupha. Imigede ingavakashelwa kuphela ngesikebhe kulwandle olunamandla futhi ungabona izinkawu zegolide zigxuma lapha nalaphaya.
Enye indawo lapho uhamba ngesikebhe yi- Isiqhingi saseBo Hon, idume kakhulu ngemihume yayo. Ingabe i- Umgede we-Trinh Nu, Umgede weSung Sot noMgede we-Trong, phakathi kwezintaba, amawa namahlathi aluhlaza. Yindawo ekude ngandlela thile ngoba kufanele uthathe uhambo lwamahora amabili ngesikebhe, ushiye iBai Chay Port, kepha kufanelekile ngoba uhambo nokuya khona kuhle, kuyingxenye yeHalong Bay National Park, enezihlahla banyan, ama-orchid nama-cycads.
Esinye isiqhingi esisendleleni yi Isiqhingi saseTi Top, nje amakhilomitha ayisishiyagalombili ukusuka eBai Chay Port. I-Titop, iqiniso elijabulisayo liyakufanelekela, igama lokugcina le-astronaut yaseSoviet eyamvakashela ngo-1962. Ibhishi layo liyamangalisa, enezindawo zokulala, izihlabathi ezithambile namanzi acwebile. Amen kwakho izindawo zokungcebeleka, imigoqo, izindawo zokudlela nezitolo yonke indawo. Kukhona ngisho nezitebhisi eziyizinyathelo ezingama-400 eziya endaweni ephakeme kakhulu esiqhingini ukuthola umbono omuhle kakhulu we-panoramic wabo bonke.
Ukusuka lapha ungabona iHalong Bay yonke, zonke iziqhingi zayo ezinabantu abaningi abadobi nabalimi. Idolobhana ngalinye selizivumelanise nezokuvakasha futhi manje selinikeza i-kayaking, ukuvakashela amapulazi amaparele, amakilasi okudoba noma uhamba nje ukwazi impilo yasendaweni. Ekugcineni, Imihume yeHalong inesisindo sayo bese ukhetha lokho okhetha ukukwazi ngeke weqe kubo: kukhona ifayela le- UDau Go Cave ngama-stalactites nama-stalagmites angaphezu kweminyaka eyizigidi ezimbili ubudala namamitha angama-20 ukuphakama.
Ngalo mgede ungenza ifayili le- Uhambo oluqondisiwe lwemizuzu engama-90 nesiqondisi esikhuluma isiNgisi, vakashela izingxenye zalo ezintathu ezikhanyisiwe, ezinokukhanya okungokwemvelo nokwenziwe, futhi ufinyelele echibini lalo elincane elinamanzi acwebile osekugcineni komzila. Kubukeka njengenganekwane. Enye i- Umgede we-Trinh Nu noma uMgede weNtombi ngesifanekiso sowesifazane esinenganekwane yaso (yowesifazane ophoqelelwe ukushada neMandarin).
La Umgede weSung Sot ngamakhamera amabili nengxenye ephezulu yamamitha angama-30, eBo Hon Island ukuthola eminye imininingwane, noma izingcingo Amadwala aqabulayo o Amatshe okuqabula, okungokoqobo uphawu lweHalong Bay, omunye ubukeka okweqhude, omunye isikhukhukazi, babukane. Kwabendawo baluphawu lothando lwaphakade ezinkulungwaneni zeminyaka.
Ngaphezu kohambo, IHalong Bay ikuvumela ukuthi wenze imisebenzi ehlukahlukene: thatha izithombe zokubukeka kwakho, ukubhukuda, ukudoba, ukushushuluza nge-snorkeling ne-kayaking, ukuhamba ngebhayisikili noma ukuhamba ngezinyawo. Iqiniso ukuthi iyindawo enhle yabantu abakhuthele, abangathandi ukuhlala phansi.
La ICat ba Island iyindawo enhle yokuhamba ngoba kunezilwane eziningi ezingavamile ukuzibona, izinkawu, izimfudu, nezindlela ezahlukahlukene zokuhamba. Ungagibela futhi ibhayisikili phakathi kwezigodi zabo. Ngokuqondile, esigodini saseViet Hau, ekugcineni kwesiqhingi, usengabona izindlu zoqalo nempilo yomdabu impela.
Ngamafuphi, iziqhingi ezaziwa kakhulu yiDau Be Island, yokuhamba nokudilika phakathi kwamakhorali nemihume, iDau Go Island enemihume emangalisayo, iCat Ba Island, izivakashi kakhulu, iBo Hon Island eneCave Hung Sot Cave, iCueva de la Virgen neCueva I-del Pelícano enama-stalactites alenga ophahleni oluphakeme nasemizaneni entantayo ejwayelekile ethekwini, okunye okuheha izivakashi.
Ekugcineni, awukwazi ukushiya leli kona laseVietnan ngaphandle kokujabulela njengoba uNkulunkulu wayehlosile gastronomy Le ndawo icebile izinhlanzi nezilwane zasolwandle ngakho-ke ama-oysters, ama-shrimp, nezinhlanzi akuyo yonke imenyu. Zihlale zihlanzekile njengoba zibanjwa ekuseni kakhulu futhi zithunyelwa kuzo zonke izindawo zokudlela. Eziningi zazo zigxile edolobheni laseBai Chay, phambi kolwandle, kepha kukhona nezinye ezisebenzayo. Ukudla kwaseVietnam ngokujwayelekile ngisho nokudla kwaseChina.
Futhi isipiliyoni sokugcina engisincomayo udle endaweni yokudlela entantayo. Kuneziningana eduze kwesiQhingi seCat Ba futhi ukudla okuphakelwayo akukusha ngoba uma kungenjalo ngabe kuyaphila. Ngokwesibonelo? Indawo yokudlela iGreen Mango, ebheke itheku, ipholile kakhulu namanani entengo aphakathi nendawo. Enye inketho ngokubukwa kwaleli chweba yiHuu Dung futhi ngesitsha esisentshonalanga ungazama iNoble House Restaurant & Bar, enkabeni yeCat Ba Island.
En Kuthengwe nge -jeje!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Ikhadi leposi laseHalong Bay, eVietnam
Yini ongayibona eSlovenia
Izindawo ongazivakashela eSpain